KUSVIRA KUKWIRA UBER TASVA NEMAWURECHAIR UNOGONESA | Karman® Mawiricheya
KUKUMBIRA KUKWESHA UBER UYE KUSVIRA KWEMAWANDA
Posted on November 28, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Uber ikambani inobvisa iyo inopa vatasvi kune vanhu kana mapoka kuti avabatsire kusvika kune kwaunoda kuenda. Uber haina chete akaita zvinoita kuti veruzhinji vagamuchire kutakura kuri nyore kutenderedza nharaunda dzawo asi avo vari mavhiripu unogona zvakare kubatsirwa neapp iyi.
hwiricheya vashandisi vava kugona kuwana kutakura munzvimbo zhinji dzine vatyairi vane zvitupa vanogona kuvabatsira nemazvo pakukwira kwavo. Vazhinji havazive nezve iyi sarudzo kana parwendo izvo zvinogona kuvamisa. Zviri nyore kwazvo kuwana Uber kuburikidza nefoni yako pamwe nekutengeka zvakanyanya uye zviri nyore kune vakawanda.
Kukumbira a wiricheya inokwanisa Uber kuchovha kwakafanana nekukumbira kutakurwa kune chero imwe.
Kutanga, unofanira kukopa application pane yako smartphone.
Kana iko iko iko kunyorera kurodha pasi, inguva yekugadzira account yako. Paunenge uchigadzira account yako, iyo app inozokumbira ruzivo rwemunhu wega sezita rako, nhamba yefoni, uye email kero.
Kana ruzivo irworwo rwatumirwa nzira yekubhadhara inofanira kuendeswa. Unogona kuisa kiredhiti kadhi, Paypal, Venmo, Uber chipo kadhi, kana kutenga Uber Cash.
Kana iyo account yagadzirwa, iwe unobvunzwa kuti uverenge uye ugamuchire iwo maitiro nemaitiro eapp.
Iyo tabo iri pamba chidzitiro ichabvunza "Kupi futi?" uye ndipo pauri mhando kwaunoda kuenda. Kana uchitaipa kero yenzvimbo yaunoda, tab iri pamusoro ichaita kazhinji auto-zadza nenzvimbo yako yazvino. Mutyairi achakusimudza panzvimbo iyoyo kunze kwekunge iwe wachinja nzvimbo yekutora. Unogona kuchinja izvi nekutaipa nzvimbo yaunoda kunhongwa.
Usati watora, unofanira kusarudza yako mhando yekutasva. Ivo vane zvikamu zvina zvavanosarudza kubva pane izvo Economy, Premium, Zvimwe Zvigaro, uye Zvimwe. Kuti uwane zvikamu zvakasiyana, iwe svaira kuruboshwe kana kurudyi. Zvewheelchair vashandisi, iwe unoshambira kurudyi kune Zvimwe uye sarudza WAV (hwiricheya Zvinowanikwa mota). Ne WAV, mutyairi akasimbiswa anotora mutyairi kumusoro mumotokari ine ramp uye kuchengetedzwa kwakakodzera zvinhu yakanangana neyako hwiricheya.
Mibvunzo Yakajairika uye Kunetsekana paUber:
Vamwe vatyairi vanokwanisa kuchovha nemunhu ari mu hwiricheya?
Hongu?, Vanogona chero bedzi paine zvigaro nemabhanhire echigaro kune yega yega.
Zvakawanda sei zvakadhura kuwana sevhisi iyi?
The mutengo uri inoverengwa otomatiki uye zvinhu senge nguva yekukumbira uye Kuwanikwa kufurira mutengo. Iye munhu anokumbira kuchovha anogona kuona iyo mutengo pamberi pechikumbiro.
Sei kuzivisa kutyaira kune ngozi?
Pachave nesarudzo pakupera kwekufamba uko vanhu vanogona kumhan'arira chero nyaya kuvandudza ari unhu yekutasva.
Ndezvipi Zvinhu Zvaungawedzera Kuti Uvandudze Mawiricheya Emagetsi?